The Sidney Morning Herald failed to follow media ethics
၂ဝ-၅-၂ဝ၁၅ နေ့ထုတ် (ဆဒ်ဒနီ မောနင်း ဟာရဲလ်) သတင်းစာခေါင်းစဉ်မှာ မြန်မာအတိုက်အခံက သူတို့ဟာ လူသားတွေပါ၊ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေမှာ အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်လို့ ရေးထားတာဟာ မမှန်ပါ။ သတင်းထဲမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက မြန်မာနိုင်ငံကနေ စွန့်စားပြီးထွက်ခွါကြသူတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ရထိုက်တယ်လို့သာ ပါရှိတယ်။ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတာက ဖတ်တဲ့သူတွေကို လှည့်စားရာကျတယ်။ အဲဒီလိုရေးလို့ NLD ကို အခြောက်တိုက် အပြစ်တင်နေတာတွေ တွေ့နေရတယ်။ လှည့်စားတာမခံကြပါနဲ့။ အရူးလုပ်တာမခံကြပါနဲ့။
Muslim people fleeing dire conditions in Myanmar are entitled to "human rights",aspokesman for Aung San Suu Kyi's opposition has urged. The title of article is of the writer not by NLD spokesperson. Don't mix up and be confused. Don’t be fooled. The Sidney Morning Herald failed to follow media ethics.